"Raha tsy maintsy fantarinao amin'ny teny iray ny antony tsy nahavitan'ny taranak'olombelona ary tsy hahatratra ny fahafaha-manaony rehetra, dia ho 'fihaonana' izany teny izany. "- Dave Barry
Ahoana raha ny fivoriana dia fiaraha-miasa izay mampiasa ny saina ny herin'ny ekipanao ary manome vokatra tsy mampino?
Ovay nomerika ny fivoriana rehetra!
Na Ekipa, Tetikasa na Fivorian'ny Birao, voalahatra na tsy voalamina, an-tserasera, hybrid na Face to Face
Mora – Hetsika – Vokatra - Fahombiazana
Avereno ho seha-pifanakalozan-kevitra ny fivoriana tsy tapaka izay mampiasa ny herin'ny olonao ary manome vokatra mahomby
Mamorona fiaraha-miasa 360° - mialoha, mandritra ary aorian'ny fivoriana - fa tsy amin'ny fivoriana ihany
Manangana rafitra fivoriana manara-penitra ary manaova fomba fanao tsara indrindra hampihenana ny fotoana lany sy ny vola very amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fivoriana sy ny fahombiazany
Alaivo sary an-tsaina ny mijery fitaratra iray izay mampiseho ny mombamomba anao O365 rehetra ary mampitombo ny ROI fihaonanao - fivoriana, hetsika, tetikasa, fanapahan-kevitra, naoty, antontan-taratasy - avy amin'ny Outlook, One Note, To Do, Planner, Teams sns ary manolotra izany rehetra izany toerana iray manana fahaiza-manao fanaraha-maso feno ahafahanao miara-miasa amin'olona!
Mametraha fandraisana andraikitra mazava amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny vokatra azo avy amin'ny fivorian'ny ekipa amin'ny toerana iray
​ Esory ny fahaverezan'ny fampahalalana manan-danja mba hiantohana ny fanarahan-dalàna sy ny lalàna
Omeo hery ny mpanatrika fivoriana rehetra handray anjara sy hampiasa ny fitaovana efa misy sy ny workflow mahazatra - eny fa na dia ny mpanatrika ivelan'ny fikambananao aza amin'ny alàlan'ny fampidirana feno amin'ireo fitaovana efa misy, toy ny fihaonambe audio, video ary tranonkala, Office365, Outlook, SharePoint ary Teams
Ampiasao ny fiparitahan'ny viriosy mForce365 miaraka amin'ny mpiasanao sy ny mpampiasa farany; fantaro hoe iza no mandray anjara ary ahoana no anaovan'izy ireo izany amin'ny fitaovana mitatitra mahery vaika an'ny mForce365
Ataovy azo antoka fa mangarahara tanteraka ny ekipa, fandraisana andraikitra ary fidirana amin'ny tsindry tokana amin'ny fampahalalana rehetra momba ny fivoriana
mForce365 no Foiben'ny fiaraha-miasan'ny fikambananao !
Kely ny fifantohana sy ny fandraisana anjara amin'ny mpanatrika manao asa maro?
Be loatra sa diso olona tao amin'ny fivoriana?
Tsy misy fandaharam-potoanan'ny fivoriana, fanapahan-kevitra ilaina na tanjona iray hanaovana ilay fivoriana?
Ny tsy fahampian'ny minitra na hetsika takiana alefa amin'ny rehetra aorian'ny fivoriana?
Vokatra tsy mamokatra (na mifanohitra amin'ny vokatra aza!)?
Ireo mpandray anjara mandany fotoana sarobidy sy mandany ny volan'ny orinasa?
Fivoriana atao isan'andro any Etazonia irery!
Ny andro fiasana dia lany amin'ny fivoriana
Tombanana ho sandan'ny fivoriana isan-taona maneran-tany
Very tamin'ny fivoriana ratsy isan-taona
Ahoana no hanampian'ny mForce365 anao hamoaka ny Herin'ny Fihaonanao ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fivorianao sy ny orinasanao!
Avereno ho forum miara-miasa sy mifantoka amin'ny vokatra ireo fivoriana tsy mamokatra. Ampiasao ny herin'ny olonao ary mamorona hetsika avy hatrany avy amin'ny fivorianao izay mitondra ny orinasanao ho any amin'ny avo lavitra.
Fandraisana anjara amin'ny tsingerin'ny fiainana maimaim-poana ho an'ireo tsy tompon'ny kaonty mForce365!
Ny antontan-taratasy rehetra, fandaharam-potoana, famintinana fivoriana navoaka tamin'ny teny anglisy sy frantsay hatomboka. Avy eo amin'ny fiteny 71 - ny fiteninao! Ravao ny sakana ary asaivo mandray anjara sy manaiky ny rehetra!
Novolavolaina tamin'ny fampiasana Dotnet 6, Web Assembly ary Blazor desktop sy finday. Miorina amin'ny navigateur miaraka amin'ny fitehirizana mandeha ho azy ary mifandray indray raha very ny fifandraisana Internet anao.
Firaketana fivoriana tsy miova
mForce365 Meeting Binder - firaketana tsy azo ovaina, nosoniavina nomerika momba ny firaketana fivoriana rehetra. Agenda, zavatra momba ny hetsika, fanapahan-kevitra ary maro hafa amin'ny 1 mora vakina amin'ny orinasa PDF marika.
Tsy ho ela dia ho hita ao amin'ny fivarotana Microsoft App sy Google ny mForce365 ary ho fampiharana MS Team voamarina.
Fiandrianam-pirenena sy fiarovana
Ny angonao, ny toerana misy anao, ny fitsipikao. Fiandrianam- pirenena feno, tsy fivadihana ary mifehy ny angonao rehetra isaky ny fivoriana sy ny vokatra.
misy Fitaovana, O/S, amin'ny fotoana rehetra!
Miasa tsara amin'ny fitaovana rehetra sy O/S, IOS ary Android!
Fahaizana miasa amin'ny fitaovana misy anao.
Fividianana amin'ny App Stores
mForce365 dia mampiasa ny sasany amin'ireo fandrosoana farany indrindra amin'ny rindranasa an-tranonkala mba hitondra anao vahaolana mirindra sy haingana, Microsoft 365 - na manana mpampiasa tokana ianao na mpampiasa iray miliara.
Amin'ny fampiasana dotnet 6, WebAssembly ary Blazor, mForce365 dia ahafahanao mampandeha ny fizotran'ny fihaonan'ny orinasanao sy ny tetik'asa amin'ny navigateur amin'ny hafainganam-pandehan'ny hardware (mihoatra ny 50x haingana kokoa noho ny fampiharana tranonkala mahazatra) ary mahatonga azy io ho fampiharana ny ho avy!
Scalability - mForce365 dia atolotra avy amin'ny mpizara tranonkala fisaka, midika izany fa misy ambaratonga tsy manam-petra, manerantany
Hafainganam-pandeha - Mampiasa ny loharanon'ny fitaovanao ny fampiharana, mitahiry angon-drakitra eo an-toerana ary noho izany dia mandeha haingana be ​
mForce365 | Ampiasao ny herinao…​ ny ekipanao amin'ny fampiharanao sy ny fivorianareo!
Nahoana ny mForce365 no haingana be?
Fanontaniana bebe kokoa